Mwari Anondinzwa Here Kana Ndikanyengetera? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Italian Japanese Kachin Kamba Kekchi Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Maya Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndau Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Valencian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Hongu, Mwari anobatsira vaya vanokumbira zvinhu chero bedzi zvichienderana nekuda kwaMwari. Kunyange kana usati wambonyengetera, mienzaniso yemuBhaibheri yevanhu vakanyengetera vachiti, “Mwari ndibatsirei,” inogona kukukurudzira. Somuenzaniso:
“Ndibatsirei, Jehovha, Mwari wangu; ndiponesei nengoni dzenyu.”​—Pisarema 109:​26, Bhaibheri muNdimi yeUnion Shona.
“Ndinoshayiwa uye ndiri murombo: Mwari wangu, ndibatsireiwo.”​—Pisarema 69:​6, Douay Version.
Zvinoratidza kuti munhu akanyora mashoko aya aitenda zvakasimba muna Mwari. Mwari anoteerera vose vanonyengetera kwaari vachizvininipisa, vakadai sevaya “vakaora mwoyo” kana kuti “vakadzvinyirirwa.”​—Pisarema 34:18.
Haufaniri kutya uchifunga kuti Mwari ari kure zvokuti haana hanya nematambudziko ako. Bhaibheri rinoti: “Jehovha akakwirira, uye anoona munhu anozvininipisa; asi munhu anozvikudza anongomuziva ari kure.” (Pisarema 138:6) Jesu akamboudza vadzidzi vake kuti Mwari ane hanya nevanhu paakati: “Kunyange bvudzi romusoro wenyu rakaverengwa rose.” (Mateu 10:​30) Mwari anoziva zvinhu zvine chokuita newe zvausingatombozivi. Kana achiziva zvinhu zvakadaro, haangazombotadzi kukuteerera paunonyengetera kuti ubatsirwe pane zvinenge zvichikudya mwoyo!​—1 Petro 5:7.
Mwari Anonzwa Minyengetero Yedu Here?
Bhaibheri rinotiudza kuti Mwari anotinzwa kana tikanyengetera kwaari nenzira yaanoda
Mwari Anopindura Minyengetero Yese Here? Tinofanira Kunyengetera Takaita Sei?
Mwari achapindura minyengetero yako here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Anondinzwa Here Kana Ndikanyengetera?
ijwbq nyaya 26
Chii Chandinganyengetera Nezvacho?